Voces Bolivianas: Cristina Quisbert nahazo vatsy ho an’ny Mpikatroka Iraisam-pirenena BlogHer · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2018 4:05 GMT
(Marihina fa tamin'ny 22 May 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Miarahaba an'i Cristina Quisbert, mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Voces Bolivianas, ny Rising Voices tamin'ny nahazoany ny Vatsy ho an'ny Mpikatroka BlogHer Iraisam-pirenena 2009. Voafidy ho anisan'ireo bilaogera 5 manerana izao tontolo izao izy hanatrika ny BlogHer iraisam-pirenena, fivoriamben'ny bilaogera vehivavy tany Chicago ny 24-25 Jolay 2009.
Araka ny mpanendry an'i Cristina:
“Ny fiezahana hampiseho ireo vondrom-piarahamonina indizeny ho toy ny loharanom-pireharehana no tanjon'ity bilaogy ity. Misy ny hevi-diso maro momba ny vahoaka indizeny, ary mampiseho ny lafiny iray manokana i Cristina sy mampiasa ny feony manokana mba hisoloana tena ireo mpikambana hafa ao amin'izany vondrom-piarahamonina ao amin'ny Altiplano Boliviana izany. Bilaogera tetezana i Cristina, mamela ireo Boliviana mitovy aminy izay mety tsy milaza ny momba azy ireo ho toy ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny indizeny, mba hifandray sy hianatra momba ny vondrom-piarahamonina indizeny any amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena. Amin'ny alàlan'ny fanoratana bilaogy amin'ny teny Anglisy ihany koa dia afaka mahatratra mpamaky betsaka kokoa izy ary mampiseho ny lafiny hafa amin'ny fiainana ao El Alto, Bolivia. “
Namoaka ity andian-tsary tsara tarehy ity izy tao amin'ny Nosy Masoandro ao amin'ny farihy Titicaca tao amin'ny iray amin'ireo bilaoginy farany.
NOSY MASOANDRO AO AMIN'NY FARIHY TITICACA
Jereo ny fampahafantarana bebe kokoa ao amin'nyCristina Quisbert.
Tsidiho ny kaontiny flickr raha hijery ireo sary mahafinaritra.
Nanoratra ny bilaoginy tamin'ny teny Espaniôla momba ny Tanandehibe Nomerika – Foaran'ny Teknolojia tao La Paz izay natao tamin'ny 15-17 May 2009 izy.
Manana antsipiriany bebe kokoa momba ity fety ity i Hugo Miranda .
Nanoratra mikasika ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny mpianatra ambaratonga faharoa ny Profesora. Lic. Elsa Muruchi Paco avy ao amin'ny vondrom-piarahamonin'i Santa Cruz ao amin'ny Voces Bolivianas:
Mifandray tsy tapaka amin'ny mpianatra ny mpampianatra ao amin'ny ambaratonga faharoa. Matetika ny mpampianatra no mifandray kokoa amin'ny mpianatra noho ny ray aman-dreniny ary mahita ny mpianatra fa ny mpampianatra no hany fomba tokana hifaneraserana amin'ny tontolon'ny olon-dehibe, tsy ampoizina ny fitomboan'ny mpianatra ara-batana, ara-tsaina ary ara-pihetseham-po haingana sy ny fanehoan-kevitr'izy ireo, nahatonga ny fanamby ho tsara kokoa izany.
Namoaka sary vitsivitsy momba ny fitsangatsanganana tsy hay hadinoina i Sergio Gutierrez.
Dora Romero ao amin'ny Las Ideas Son Primero (Voalohany ny Hevitra ) nanoratra momba ny fivoaran'ny tanànan'i El Alto fa nandeha bisy efa ho antsasak'adiny mahery izy herintaona lasa izay rehefa nitady fivarotana aterineto. Ankehitriny, misy fivarotana aterineto isaky ny zoro-trano any amin'ny faritra misy azy, misy fivarotana aterineto telo amin'ny arabe iray. Manahy izy sao dia ho lasa andevon'ny milina ny olona amin'ity fivoaran'ny teknolojia haingana ity.
Nanoratra momba ny Miss La Paz miaraka amin'ny sary i Alberto Medrano ao amin'ny Noticias El Alto.
Raha te ahafantatra bebe kokoa momba ny famatsiam-bolan'ny Rising Voices ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny Voices Bolivianas ianao dia tsidiho ny pejin'ny tetikasa .